ပြည်သူများ ရှောင်ရှားသင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အစားအစာများ ~ The ICT.com.mm Blog
ပြည်သူများ ရှောင်ရှားသင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အစားအစာများ
လူတိုင်း နေ့စဉ်ထိတွေ့ စားသုံးနေသော အရာများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့် လျော်ညီစွာ စားသုံးသင့်ပါ ကြောင်း သိမှတ်သမျှ ပြန်လည် ဖောက် သည်ချ ပြောလိုက်ပါရစေ။ နိုင်ငံခြား တိုင်း ပြည်များတွင် သကြားကို မူလ သဘာ၀ အရောင်အတိုင်း ဝါညစ်ညစ် သကြားများကို စားသုံးကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌မူ ဟိုက် ဒရို ဟုခေါ်သော (Chemical) ချွတ်ဆေး သုံး၍ ဖြူဖွေးသော သကြားများကို ရွေးချယ် စားသုံးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထန်းလျက် သည်လည်း မူလအညိုရောင် ပျောက်ကာ ချွတ်ဆေးကြောင့် ဖြူဖွေးသွားကာ နေ့စဉ် သုံးသည့် အိမ်သုံးဆား သည်ပင်လျှင် ဓာတု ချွတ်ဆေးသုံး၍ ဖြူဖွေးအောင် လုပ်ကြ ပါတယ်။ထိုဓာတုချွတ်ဆေးများသည် ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေသဖြင့် သဘာ၀ အရောင်ကို ရွေးချယ် စားသောက်သင့် တယ်ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက် အသုံးမပြုသင့်ပဲ ရှောင်ရှား သင့် တာကတော့ တကယ်လို့သာ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှာကို ကြောက်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ။ ပလတ် စတစ်နှင့် ဖော့ဗူးတွေကို ရှောင်ရှားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးရှေးယခင်ကတော့ ဘာပဲ ၀ယ်၀ယ် တစ်လုံးချိုင့်လေး လက်ကဆွဲပြီး သွား၀ယ်ကြတာကို ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ် တုန်းကတော့ မြင်ဖူးခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ဖက်ရည် ၀ယ်၀ယ်၊ အအေး၀ယ်၀ယ် အိမ်က အဘွားက ယူသွားခိုင်းလို့ ၀ယ်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အလွယ် ကြိုက်တတ်တဲ့ မြန်မာတွေဟာ ယူသွားရမှာ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ မသယ်တော့ပဲ အလွယ် ထည့်ပေးတာနဲ့ ကျွန်မလို ၀ယ်ခဲ့မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီတော့ မုန့်ဟင်းခါးပဲ ၀ယ်၀ယ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ အသုပ်စုံ တွေ၊ ထုံချိုင်းတွေ၊ အကြော်စုံတွေ၊ အကင် တွေပဲ ထုပ်ထုပ်၊ ပလတ်စတစ်တွေ၊ ကြွတ် ကြွတ်အိတ်တွေနဲ့ချည်းပဲ သုံးနေကြတာကို အများအားဖြင့် တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ပလတ် စတစ်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ ပလတ်စတစ်ဆိုက်ဇာ ဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့ စတိုင်းရင်း (Styrene)ဆိုတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းတွေဟာ အပူဓာတ်နဲ့ပဲ တွေ့ တွေ့ဆီပါတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ပဲ တွေ့တွေ့ အစားအသောက်တွေထဲကို ဓာတ်ပြု ပျော် ၀င်တော့တာပါပဲ။ နောက်ပြီး ကလေး နို့ဘူး တွေ ပြုလုပ်တဲ့ PVC ပလတ်စတစ်နဲ့ ပလတ် စတစ် ရေပိုက်တွေမှာ မိုနိုမာ (Monomer)ဆိုတဲ့ အင်မတန် အဆိပ်ပြင်းပြီး ကြောက် စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ပါ၀င်တာ သုတေသနပြုသူများက တွေ့တယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။ ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံး ဆိုးရွားတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်စေ နိုင်တာမို့ အရင်တုန်းကလို စက္ကူတွေ၊ အင် ဖက်တွေ၊ ဗန်ဒါရွက်တွေ၊ စတီးချိုင့်တွေ၊ ဖန်ဘူးတွေနဲ့ပဲ အစားအသောက်တွေကို သတိထား ပြောင်းလဲကြစေချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒန်ပေါက်ဆိုင်တွေ၊ စားသောက် ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖော့ဘူးတွေ ဟာလည်း စတိုင်းရင်း (Styrene) ဓာတ်ပါတဲ့ ပလတ်စတစ် အုပ်စုတွေဖြစ်လို့ ဖော့ဘူးတွေ တစ်ခါသုံး ပလတ်စတစ်တွေ လုံး၀ အသုံး မပြုဖို့ ဆင်ခြင်သင့်ကြောင်း၊ နောက် အသုပ် ဆိုင်တွေ၊ အကြော်ဆိုင်တွေ၊ ထုံချိုင်းဆိုင် တွေ၊ အကင်ဆိုင်တွေ၊ တုတ်ထိုးဆိုင်တွေမှာ နေ့စဉ်လူတွေ အများအားဖြင့် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ အသီးသီး ခင်း ကျင်း ရောင်းချနေတာတွေ မြင်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် လူတွေ မြိန်ရည် ယှက်ရည် စားသောက်နေကြတာကတော့ အန္တရာယ်ရှိ တားမြစ်ဆိုးဆေး နီနီရဲရဲတွေ ရယ်၊ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဓာတု တာရှည်ခံဆေးတွေကတော့ အစာအိမ် အူ လမ်းကြောင်း ကင်ဆာ ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဆာ(လ်)ဖျူရစ် အက်ဆစ်ပြင်း (H2SO4) ရောစပ်ထားတဲ့ အချဉ်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ် တွေပါပဲ။ ဆာ(လ်)ဖျူရစ် အက်ဆစ်က နည်း နည်းလေး ထည့်ရုံနဲ့ အချဉ်ရည် အရသာကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘက်ထရီအိုးမှာ သုံးတဲ့ အက် ဆစ်တစ်မျိုး ပါပဲတဲ့။ ရေရှည် စားသုံးရင် တော့ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာ တွေကို ကျိန်းသေဖြစ်နိုင်တာမို့ လုံး၀ ရှောင်ကြဉ် သင့်တဲ့ အထဲမှာ ပါ၀င်နေပါတယ်။
အချိုရည် အသောက်များတဲ့ ကိုကို မမ တွေနဲ့ ကလေးတွေကို ဂျယ်ရီ၀ယ်ကျေွးတဲ့ မိခင်များ သတိထား ရမှာကတော့ အချိုရည် ဗူးများတွင် တားမြစ်ဆိုးဆေး၊ ကင်ဆာဖြစ် စေသော တာရှည်ခံဆေး၊ သကြားထက် အဆ ၂၀၀ ပိုမိုချိုစေသော ပါဝါသကြားနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ကဖိန်းဓာတ်များ ပါ၀င်ပြီး ခံတွင်းကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ၊ ဆီးချိူရောဂါနှင့် အ၀လွန် ရောဂါ များအပြင် အသည်းကင်ဆာရောဂါ တို့ကိုပါ ဖြစ်ပွားစေ တတ်ကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုရ ပါသည်။ ထို့အတူ ဂျယ်လီဗူး များတွင်လည်း တရုတ်မှလာသော ဂျယ်လီပေါင်ဒါ၊ ဆီထရစ် အက်ဆစ်၊ Sodium Benzoate ခေါ် တာရှည်ခံ ဆေးပါ၀င်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါ များကို ဖြစ်ပွားစေသဖြင့် သားသားမီးမီးတို့ကို အရမ်းမကျေွးသင့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် လုံး၀ မကျေွးပဲ ရောင်းလည်း မရောင်းသင့်ပါ ကြောင်း သိမှတ်ရပါတယ်။ နောက် မီးဖို ချောင်သုံး အိမ်ရှင်မများ သတိပြုစရာတွေ ကတော့ မယ်လမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဖိုက်ဘာ ပစ္စည်းများသည် အပူနှင့် ထိတွေ့လျှင် ဓာတ် ပြု ပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့် ကျောက်ကပ် ပျက်စီး ခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါ များကို ဖြစ်ပွားစေ သဖြင့် လုံး၀အသုံးမပြုသင့်ပါ။
အစားအသောက်များထဲတွင် တားမြစ် အန္တရာယ်ရှိ ဆိုးဆေးများ အသုံးပြုထားသော မျှစ်နီ၊ မျှစ်ဝါ၊ ပုဇွန်ချဉ်နီနီ၊ အဝါရောင် ဆိုးထားသော ငါးပုဏ္ဏား၊ ငါးမြေွထိုး၊ ရွေှငါး၊ ကြက်သားများနှင့် အနီရောင် ဆိုးထားသော ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ပတ္တမြား ပြောင်း ဖူး၊ ငါးပိ၊ ပဲနီလေး၊ ပဲဝါလေး၊ မက်မန်းသီး၊ ဆီးထုတ် စသည်တို့သည် အသည်းနှင့် ကင်ဆာ ရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေတတ် သဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါ ကြောင်း ဖတ်မှတ် သိရှိရပါတယ်။ တစ်ဆက် တည်း သတိပြု ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အထဲမှာ ပါ၀င်တဲ့ အသီးအနှံများမှာ ဓာတုဟော်မုန်း ဆေးများ အသုံးပြုထားပြီး အဆမတန် ကြီး ထွားနေသော မုန်လာဥအဖြူများ၊ အမြစ် တိုတို အလုံးတုတ်တုတ်နှင့် ပဲပင် ပေါက်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးအပြင်းစား သုံးထားသည့် ဂေါ် ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာထုပ်၊ မုံညှင်းထုပ်များ နှင့် ဆေးစိမ် ဆေးဖျန်းထားပြီး မှည့်နေသော သရက်သီး၊ သငေ်္ဘာသီး၊ လိမေ္မာ်သီး၊ ပန်း သီး၊ ငှက်ပျောသီး စသည်တို့သည် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် လူသေကောင် မပုပ်အောင် ပြုလုပ်သည့် ဖော်မလင်နှင့် အသုံးပြုထား သော ပဲပြား၊ မဲနယ်ဆိုးထားသော ပုဇွန်၊ ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာပါသော ငါးပိရေ ကျိုတို့ကိုလည်း ကင်ဆာဖြစ်မှာ ကြောက်ရင် တော့ ရှောင်ရှား စားသောက်နိုင်ပါတယ်။ အစေ့မပါတဲ့ စပျစ်၊ ကီလိုမာလကာသီးနှင့် ဆီးသီး စတဲ့ ပုံမှန်စိုက်ပျိုးထားသော အသီး အနှံမဟုတ်ပဲ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ အသီးမှန်သမျှ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်ရှိပါကြောင်း သိရှိရပါ တယ်။ ပြောရင်တော့ ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စားအုန်းဆီတွေ မစားသင့်ကြောင်းတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ပြော သာပြောရတာ စီးပွားရေး လုပ်စားတဲ့သူတွေ ကလည်း ၀မ်းစာအတွက် မလုပ်မဖြစ် လုပ် နေကြတော့ ဒါတွေမှ မစားရင်လည်း ဘာ တွေစားရမလဲလို့ စောဒက တက်စရာ ရှိပါ တယ်။ စားတော့ စားကြပေါ့ အလွန်အကျွွံ စားရင်တော့ ရောဂါပိုဖြစ်မြန်မယ်လို့ ထင်မြင် မိပါတယ်။
ဒီလိုမှ မပြောရင်လည်း ရောင်းစား တဲ့သူတွေက လာရိုက်မှာလည်း ကြောက်ရ သေးတယ်။ နောက် ဘာလုပ်ကိုင် စား သောက်ကြမလဲ ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ညီမလေး တစ်ယောက် ဆို အမြဲလမ်းဘေး အသုပ်တွေ စားဖြစ်တော့ နောက်ဆုံး ဗိုက်ခဏခဏအောင့်ကာ ဆေးရုံ မှာ ပြရတော့တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိ သွားပြီး အစာအိမ် မှန်ပြောင်းကြည့်ရတဲ့ အဆင့် တောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီလို ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း အသုံးမပြုတဲ့ အစားအစာများကိုသာ ရောင်း ချ သင့်ပါကြောင်းနှင့် စားသုံးသူများ အနေ ဖြင့်လည်း သတိထား ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါ ကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ အခုလို သိမှတ်ရ အောင် လမ်းညွှန်ပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ စား သုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းကိုလည်း အ ထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြော လိုက် ရပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံး သူ ကာကွယ်ရေးအသင်းသို့ ၀င်ရောက်လိုသူ များနှင့် အကူအညီ တောင်းခံလိုသူများ ဖုန်း -၆၄၄-၀၉၀နှင့် ၀၉-၄၂၁-၁၂၁-၈၉၀သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးလိုက်ပါရစေရှင်။
Newer Myanpay Account ရှိသူတိုင်း Online မှ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်
Older ငါ့ကို . . . သတ်တော့မယ် . . .
အရောင်၊ အနံ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ကြာရှည်ခံဆေးတွေ မပါဝင်ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ Tipco 32 Veggi and Mixed Fruit Juice
အရောင်၊ အနံ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ကြာရှည်ခံဆေးတွေ မပါဝင်ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ...
Yum! Brands, Inc.နှင့် Yoma Strategic Holdings တို့ က မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသော KFC အား ဖွင့်လှစ်မည်
Yum! Brands, Inc.နှင့် Yoma Strategic Holdings တို့ က မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသော KFC အား ဖွင့်လှစ်မည်။စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ အော...